कबड्डी र कबड्डी कबड्डीको मिश्रण नै मिस्टर झोले : राम बाबु गुरुङFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कबड्डी र कबड्डी कबड्डीको मिश्रण नै मिस्टर झोले : राम बाबु गुरुङ
फिल्मी फण्डा । निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई पछिल्लो समय एउटा ओरोप लागिरहेको छ । त्यो आरोप हो, रामबाबु गुरुङलाई एकै प्रकारको बाहेक अरु फिल्म बनाउन आउँदैन । फिल्म मिस्टर झोले रिलिज पछि झन् यो आरोपको चर्चा नै भयो । फिल्मकर्मी, पत्रकार देखी दर्शकले रामबाबुलाई यस्तै आरोप लगाए । आरोप लगाउनेले लगाए पनि निर्देशक रामबाबु गुरुङले यसको खण्डन गर्न सकेन । अझ आफु स्वयमले आरोपलाई अप्रत्यक्ष रुपमा स्विाकारेको बुझिएको छ ।
सावा नै फिर्ता नभएको फिल्मको सक्सेफुल पार्टिमा रामबाबु गुरुङले यस्तो कुरा स्विकारेका हुन् । लगातार निरन्तरतामा हुनुहुन्छ । कबड्डी कै गन्ध मिस्टर झोलेमा छन् नि त भने प्रश्नमा उनले स्विकार्दै आफुले कबड्डी र कबड्डी कबड्डी को मिश्रण नै मिस्टर झोले बनाएको स्विकारेका हुन् । फिल्म रिलिजपूर्व निर्माण टिम, निर्देशक रामबाबु गुरुङ र कलाकार दयाहाङ राईले फिल्म अरु भन्दा फरक भएको र कबड्डीको गन्ध नरहने तर झोलेको फ्लेवर आउने बताईएको थियो । तर टिमको यो कुरा एक हप्ता पनि टिक्न सकेन अर्थात सबै टिम झुटा निस्किए ।
अन्तत फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङ फिल्मको वारेमा भएको आरोप स्विकारी छाडे । लगातार यस्तै फिल्म र कलाकारहरुको अभिनयबाट दर्शकहरु आजित भईसकेका छन् । यसतर्फ ध्यान दिई निरन्तरता भन्दा बाहिर निस्किएर फरक र नयाँ कथामा फिल्म गर्न सके रामबाबुलाई राहत मिल्थ्यो की ? टेकेन खड्का र रौनक विक्रम कँडेलले निर्माण गरेको फिल्ममा दयाहाङ राई, दिया पुन, बर्षा राउत, बिजय बराल, प्रविण खतिवडा, अरुणा कार्की लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।